Semalt SEO मा सफल हुन कसरी व्याख्या गर्दछ
जब तपाई यो पढ्दै हुनुहुन्छ, खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) विकसित हुँदैछ। यो कसैको लागि वा केहिको लागि यसको प्रगतिमा रोकिदैन। यो सप्ताहन्तको लागि 'चिल' गर्दैन र न त यो आउँदै गरेको छुट्टीमा। जैसा कि तपाइँ सचेत हुनुहुन्छ, खोजी ईन्जिनको लक्ष्य खोजी क्वेरीको पहिलो पृष्ठमा सब भन्दा सान्दर्भिक र जानकारीपूर्ण वेबसाइटहरू राख्नु हो। रायन जोनसन, Semalt विज्ञ भन्छन् कि खोज ईन्जिनहरूले एल्गोरिदमहरू प्रयोग गर्दछ जुन यसलाई प्राप्त गर्न नियमित रूपमा परिवर्तन हुन्छ। त्यस्तै, तपाइँ प्रत्येक एक दिन नयाँ केहि जान्नको लागि तयार हुनुपर्दछ ताकि तपाइँ पछाडि नहुनुहोस्।
तपाइँको गौरव मा आराम नगर्नुहोस्
त्यसोभए तपाईं मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ किनभने तपाईंसँग एक छैन, दुई वा तीन तर पाँच वेबसाइटहरू उच्च स्थानमा प्रतिस्पर्धी कीवर्डहरूको लागि शीर्ष श्रेणीकरण गर्दै? ठीक छ, तपाइँको उपलब्धि को लागी बधाई हो। त्यो कुनै सानो उपलब्धि हो। यो राम्रो श्रेणीकरण कायम गर्न साइट मालिकले के गर्नुपर्छ? याद गर्नुहोस् कि यसले लिने सबै एक एल्गोरिथ्म अपडेट हो र सबै परिवर्तन हुन्छ। के तपाइँको वेबसाइटहरु भविष्य को प्रमाण हो? के तपाइँ तपाइँको खेलको शीर्षमा रहनको लागि निम्न सुझावहरू विचार गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ?
कुरा यो हो, यदि तपाईंले सही प्रश्नहरू सोध्नुहुन्न भने तपाईं यो खेलको लागि लामो समयसम्म अगाडि बढ्नुहुन्न। धेरै दिन गए जब एसईओ केवल एक जैविक सूची थियो। आज, स्थानीय लिस्टि,, सोशल मिडिया, भिडियो र अन्य प्यारामिटरहरू पनि विचार गरिदैछन्।
माथि वर्णन गरिए अनुसार प्रश्नहरू सोध्नु राम्रो हो, तपाईंलाई दिइएको हरेक बिटको सूचनालाई ध्यान नदिनुहोस्। अवश्य पनि, तपाईंले अन्नको भुस छुट्याउनु पर्छ। यो स्पष्ट छ कि तपाईंले चीजहरूको परीक्षण गर्नु पर्छ। सबै परिकल्पना परीक्षण गर्नुहोस्। यदि यसले कार्य गर्दछ भने, यो राम्रो छ, र यदि त्यसो भएन भने त्यो एक राम्रो अनुभव हो।
नयाँ सुझावहरूको लागि खुला रहनुहोस्
प्रत्येक एसईओ विशेषज्ञसँग नियमित टेक्निक हुन्छ उनी / उनीले उनीहरुको वेबसाइटमा प्रयोग गर्छन्। कल्पना गर्नुहोस्, यदि तपाईं एसईओ मास्टर हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई सुझाव गरिएको कुनै कुरा विचार गर्नुहुन्छ? त्यसैले तपाईका वरिपरिका व्यक्तिहरूबाट सल्लाह र विचारहरू सुन्न तयार हुनुहोस्। यदि तपाईं बाकस बाहिर सोच्न सक्नुहुन्न भने मलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईं टाढा जानुहुने छैन।
गुगल, बिंग, याहू र अन्य खोज इञ्जिनहरू जटिल एल्गोरिदमहरू लिएर आउँदैछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि उत्तम बाहेक अरू केही छैन। चीजहरू उजागर गर्ने क्रममा, केहि SEO प्रविधि अप्रचलित अनुवाद गर्न सकिन्छ। के तपाईंलाई ती दिनहरू याद छ जब वेबसाइटको पृष्ठभूमिमा उनीहरूको सामग्रीको पाठसँग मेल खान्छ? त्यसोभए, कडा प्रश्नहरू सोध्नुहोस्, विचारहरू जाँच्नुहोस्, खुला दिमागमा हुनुहोस्, र तपाईंलाई कस्तो लाग्छ चीजहरू मनपर्दैन।